A ga-ewepụta OnePlus 7T Pro na Ọktọba | Gam akporosis
Onye OnePlus 7T Pro nwere ike ịnwe ụbọchị ngosi
Izu ndị a amalitela nweta asịrị mbụ banyere OnePlus 7T Pro, onye nke gabu ogwugwu elu ozo nke akara China. N'oge a anyị amachaghị banyere ekwentị a nke ika, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ ga-abụ ụbọchị ngosipụta maka ya, dịka mgbasa ozi dị iche iche gosipụtarala ya. Dị ka ọ dị na mbụ, ọ ga-abata n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Akara ndị China na-enyekarị ọkwa nke abụọ dị elu n'oge mgbụsị akwụkwọ, ihe yiri ka a ga-emeghachi n'afọ a. Yabụ n'ime ọnwa ole na ole anyị nwere ike ịmata nke a OnePlus 7T Pro. Ọhụrụ dị elu maka akara ahịa ndị China.
Ọktoba 15 yiri ka ụbọchị a họọrọ akara ahụ. N'ụbọchị a ka a ga-amara OnePlus 7T Pro. Ọ bụ asịrị, maka ugbu a, na-agwa anyị na afọ a ga-abụ ụzọ ngosi dịtụ karịa nke nkịtị. Ebe ọ bụ na ika ahụ na-ahapụkarị anyị na ekwentị ndị a na mbubreyo Ọktoba ma ọ bụ mmalite Nọvemba.
Yabụ enwere mgbanwe dị ukwuu na nke a site na akara ndị China. Anyị amaghị n’ezie ihe kpatara ya maka nke afọ a ka emere ngosi ahụ tupu oge nkịtị. Ọ bụ ezie na a gharịrị iburu ya n’uche na ọ bụ asịrị, nke na-apụtaghị na nke a bụ ụbọchị ikpeazụ.
Ya mere, anyị ga-echere ịnwe data ọhụrụ n'oge na-adịghị anya site na ika ahụ. Onye OnePlus 7T Pro na-ekwe nkwa ịbụ nnukwu ekwentị, nke dịka ụfọdụ asịrị nwere ike ịbụ nke izizi nke akara a nwere 5G. Mgbe ọ dịbeghị nkwenye na asịrị ndị a gbasara ngwaọrụ ahụ.
Anyị ga-ege ntị na nkọwa ọhụrụ banyere OnePlus 7T Pro. Chinesedị ndị China egosipụtaghị ihe ọ bụla ruo ugbu a, mana ọ dị ka ọnwa ole na ole anyị ga-enwe ike ịma ya na ọkwa. O doro anya na izu ole na ole ndị a na-esote ga-agba ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ gbasara njedebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Onye OnePlus 7T Pro nwere ike ịnwe ụbọchị ngosi
Nke a bụ aesthetics nke Meizu 16s Pro, ọkọlọtọ na-esote ya na Snapdragon 855 Plus